मलेसियामा नेपाली सुरक्षा गार्ड माथि स्थानीय द्वारा कुटपिट ! - jagritikhabar.com
मलेसियामा नेपाली सुरक्षा गार्ड माथि स्थानीय द्वारा कुटपिट !
मलेसियाको नयाँ रोजगार खुले संगै खुसी रहेका नेपालिहरु भने मलेसियामा शुक्रबार घ’टेको एउटा घ’टनाले स्त’ब्ध बनाएको छ ।
मलेसियामा सुरक्षा गार्डमा कार्यरत रहेका एक नेपाली सुरक्षागार्ड माथि मलेसियाका स्थानीयदारा कु’टपिट गरिएको छ।
नेपाली सुरक्षागार्ड माथि मलेसियाका स्थानीयदारा कु’टपिट गरिएको भिडियो सामाजिक संजालमा आएको छ र त्यसको प्रहरीले पुष्टि समेत गरेको छ ।
मलेसियामा नेपाली भनिएका एक सुरक्षा गार्ड कुटिएको भिडियोबारे मलेसियास्थित नेपाली दूतावास ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । दूतावासले घटनाबारे प्रारम्भिक जानकारी लिएर आवश्यक छानबिन र कारबाहीका लागि मलेसिया प्रहरीमा प्रारम्भिक उजुरी दिएको पनि जनाएको छ ।
मलेसियामा एक नेपाली कामदारलाई कुटपिट गरेको यो दृश्य यस्तो पिडा आखिर कहिलेसम्म सरकार आफ्नो ज्यान दाउमा राखेर रेमिट्यान्स पठाउँने यि नै नागरिक हुन।
‘मलेसियामा सेक्युरिटी गार्डलाई कुटपिट गरेको सामाजिक संजालमा आएको भिडियो सम्बन्धमा नेपाली राजदूतावास क्वालालम्पुरको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सो घटनाको थप अनुसन्धानका निम्ति राजदूतावासको पहलमा मलेसिया प्रहरीमा प्रारम्भिक उजुरी गरिसकिएको छ ।